SHINee အဖွဲ့ဝင် Onew တစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလား? 😮 – Trend.com.mm
SHINee အဖွဲ့ဝင် Onew တစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလား? 😮
Posted on August 10, 2018 August 10, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SHINee အဖွဲ့ဝင် Onew နဲ့ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ ကောလဟာလတွေပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။Onew ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို လှီးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သလားဆိုတဲ့ သတင်းပါ။
ကောလဟာလသတင်းဆိုပေမဲ့လည်း သူ့ပရိသတ်တွေအတွက် ထိတ်လန့်စရာပါပဲ။Onew ဟာ သိပ်မကြာခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့Korean Music Festival ပွဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ပရိသတ်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ထိတ်လန့်စရာ Caption လေးနဲ့တကွတင်ခဲ့ရာကနေ တစ်ခြားပရိသတ်တွေကသတိထားမိလာခဲ့ပြီး အင်တာနက်မှာပရိသတ်တွေရဲ့စကားတွေဆူညံနေခဲ့တာပါ။
ပုံထဲမှာ Onew ဟာ ဘယ်ဘက်လက်နဲ့မိုက်ကိုကိုင်ထားပြီး ညာဘက်လက်မှာတော့ လက်အနားကို အဆုံးထိဆွဲချထားတာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။Caption ကလည်း “Onew ရဲ့ညာဘက်လက် တစ်ခုခုဖြစ်ထားပုံရတယ်”ဆိုပြီးရေးခဲ့တာပါ။တကယ်တော့Onew ဟာ ညာသန်သမားဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စကားပြောတဲ့အခါဖြစ်စေ၊သီချင်းဆိုတဲ့အခါဖြစ်စေ မိုက်ကို ညာဘက်လက်နဲ့ပဲကိုင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲမှာတော့ မိုက်ကိုဘယ်လက်နဲ့ကိုင်ထားခဲ့ပြီးညာဘက်လက်အနားကိုလည်းအောက်ထိဆွဲချထားလို့ လက်ကောက်ဝတ်နေရာကိုလည်းသေချာမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်တွေကစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ကာ Red Velvet ရှိုးပွဲက ပုံတွေကိုလည်းပြန်ရှာခဲ့ပပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း Onew က လက်ရှည်အကျီကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်နေရာကိုဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။အားပေးတဲ့အလင်းရောင်တုတ်ချောင်းကိုလည်း ညာဘက်လက်နဲ့မကိုင်ပဲ ဘယ်ဘက်လက်ကိုသာသုံးပြီးကိုင်ခဲ့သလို ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်တဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်လက်နဲ့သာကိုင်ခဲ့ပြီး ညာဘက်လက်ကိုမလှုပ်ရှားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေ ညာဘက်လက်မှာဒဏ်ရာဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲလို့ ပရိသတ်တွေက ၀ိုင်းပြီးထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ စိုးရိမ်တတ်လွန်းတဲ့ပရိသတ်တွေက Onew သူ့ရဲ့ ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖုံးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုတစ်ခုခုလုပ်ထားလေသလားလို့သံသယဖြစ်ချင်နေကြပါတယ်။ဒီလိုသံသယဖြစ်နေရတာကလည်း သူတို့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jonghyun ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေခဲ့ဖူးတာကြောင့်ရယ်ပါ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်း ဘာအရိပ်အငွေ့အသက်မှမရပဲ ရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့် SHINee ပရိသတ်တွေအသည်းကွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့ စတိုင်လ်ထုတ်တာလို့ပြောနေကြသလို တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့ Onew က ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလား၊ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးမေးခွန်းတွေအပြည့်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကတော့ မတော်တဆဖြစ်တာကြောင့်လက်ထိခိုက်သွားတာလို့ထင်မြင်ကြပြီး သိပ်အများကြီးမထိခိုက်ဖို့လည်း ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ နာမညျကြျောအဆိုတျောအဖှဲ့တဈခုဖွဈတဲ့ SHINee အဖှဲ့ဝငျ Onew နဲ့ပတျသကျလို့ ပရိသတျတှကွေားထဲမှာ ကောလဟာလတှပြေံ့နှံ့နခေဲ့ပါတယျ။Onew ဟာ သူ့ရဲ့ လကျကောကျဝတျကိုလှီးဖွတျဖို့ကွိုးစားခဲ့သလားဆိုတဲ့ သတငျးပါ။
ကောလဟာလသတငျးဆိုပမေဲ့လညျး သူ့ပရိသတျတှအေတှကျ ထိတျလနျ့စရာပါ။Onew ဟာ သိပျမကွာခငျက ကငျြးပခဲ့တဲ့Korean Music Festival ပှဲမှာဖြျောဖွခေဲ့ပွီး ပရိသတျတဈယောကျက သူ့ရဲ့ ဓာတျပုံကို ထိတျလနျ့စရာ Caption လေးနဲ့တကှတငျခဲ့ရာကနေ တဈခွားပရိသတျတှကေသတိထားမိလာခဲ့ပွီး အငျတာနကျမှာပရိသတျတှရေဲ့စကားတှဆေူညံနခေဲ့တာပါ။
ပုံထဲမှာ Onew ဟာ ဘယျဘကျလကျနဲ့မိုကျကိုကိုငျထားပွီး ညာဘကျလကျမှာတော့ လကျအနားကို အဆုံးထိဆှဲခထြားတာမွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။Caption ကလညျး “Onew ရဲ့ညာဘကျလကျ တဈခုခုဖွဈထားပုံရတယျ”ဆိုပွီးရေးခဲ့တာပါ။တကယျတော့Onew ဟာ ညာသနျသမားဖွဈပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့ စကားပွောတဲ့အခါဖွဈစေ၊သီခငျြးဆိုတဲ့အခါဖွဈစေ မိုကျကို ညာဘကျလကျနဲ့ပဲကိုငျထားလရှေိ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဒီပှဲမှာတော့ မိုကျကိုဘယျလကျနဲ့ကိုငျထားခဲ့ပွီးညာဘကျလကျအနားကိုလညျးအောကျထိဆှဲခထြားလို့ လကျကောကျဝတျနရောကိုလညျးသခြောမမွငျခဲ့ရပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပရိသတျတှကေစိုးရိမျတကွီးဖွဈကာ Red Velvet ရှိုးပှဲက ပုံတှကေိုလညျးပွနျရှာခဲ့ပပါတယျ။အဲ့ဒီမှာလညျး Onew က လကျရှညျအကြီကိုဝတျဆငျထားပွီးသူ့ရဲ့လကျကောကျဝတျနရောကိုဖုံးထားခဲ့ပါတယျ။အားပေးတဲ့အလငျးရောငျတုတျခြောငျးကိုလညျး ညာဘကျလကျနဲ့မကိုငျပဲ ဘယျဘကျလကျကိုသာသုံးပွီးကိုငျခဲ့သလို ဆိုငျးဘုတျကိုငျတဲ့အခါမှာလညျး ဘယျလကျနဲ့သာကိုငျခဲ့ပွီး ညာဘကျလကျကိုမလှုပျရှားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ညာဘကျလကျမှာဒဏျရာဖွဈနတေဲ့ပုံပဲလို့ ပရိသတျတှကေ ဝိုငျးပွီးထငျကွေးပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ပွီးတော့ စိုးရိမျတတျလှနျးတဲ့ပရိသတျတှကေ Onew သူ့ရဲ့ ညာဘကျလကျကောကျဝတျကိုဖုံးထားတာနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့လကျကောကျဝတျကိုတဈခုခုလုပျထားလသေလားလို့သံသယဖွဈခငျြနကွေပါတယျ။ဒီလိုသံသယဖွဈနရေတာကလညျး သူတို့အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Jonghyun ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျသတျသခေဲ့ဖူးတာကွောငျ့ရယျပါ။အဲ့ဒီတုနျးကလညျး ဘာအရိပျအငှအေ့သကျမှမရပဲ ရုတျတရကျကွီးဖွဈသှားခဲ့တာကွောငျ့ SHINee ပရိသတျတှအေသညျးကှဲခဲ့ဖူးပါတယျ။
တဈခြို့ပရိသတျတှကေတော့ စတိုငျလျထုတျတာလို့ပွောနကွေသလို တဈခြို့ပရိသတျတှကေတော့ Onew က ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျသတျသဖေို့ကွိုးစားခဲ့တာလား၊ဘာကွောငျ့လဲဆိုပွီးမေးခှနျးတှအေပွညျ့ရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။တဈခြို့ကတော့ မတျောတဆဖွဈတာကွောငျ့လကျထိခိုကျသှားတာလို့ထငျမွငျကွပွီး သိပျအမြားကွီးမထိခိုကျဖို့လညျး ပရိသတျတှကေမြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ယူတတ်ရင်ဒီသင်ခန်းစာတွေရပါတယ် 🌻